मेरो बद्नाम गर्न खोजियो – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
६ कार्तिक २०७७, बिहीबार ०६:२२ English
मेरो बद्नाम गर्न खोजियो
राजन घिमिरे, काठमाडौ । सबै छ यिनीसँग । उचाइ, आकर्षक अनुहार, मिलेको शरीर अनि आकर्षण । उसो भए के छैन त ? जवाफमा नायिका जेनिशा केसी भन्छिन्, चाकडी र चाप्लुसी गर्ने बानी छैन मसँग । त्यसैले पछाडि परेकी हुँ ।’
नायिका मौसमी मल्लले सिनेमाको रंगीन दुनियाँमा छिराएकी हुन् यिनलाई । मौसमी आफैंले बनाएको चलचित्र गिरफ्तारमा काम पनि रामै्र गरिन् यिनले र त्यसपछि अन्य सिनेमाहरूमा पनि खेलिन् जेनिशा । तर, अहिले उनको चर्चा गरम भइरहेको छैन । सेलाउँदै गएको छ– यो कुरा मान्दिनन् जेनिशा । उनले भनिन्, ‘म गरम पनि भएकी छैन र सेलाएकी पनि छैन । यहाँ गरम हुन खराब सिनेमा खेल्नुपर्छ तर, म त्यस्ता फिल्म खेलेर गरम हुन चाहन्न बरु सेलाउनुमा नै ठीक छ ।’
करिब एक दर्जनभन्दा बढी सिनेमामा काम गरिसकेकी छिन् जेनिशाले । यसबीचमा राम्रा र नराम्रा सबै अनुभव उनले संगालेकी छिन् । ‘यहाँ त कोहीसँग बोलेमा वा नजिक भएमा त्यसको अर्थ नै गलत लगाउँछन् । अनि नबोलेमा कस्तो गम्म भएर फुलेकी भन्छन् । अचम्म लाग्छ कि मन र व्यवहार बुझ्नै गाह्रो,’ यही हो जेनिशाको भोगाइ । अर्को कुरा, उनी पारिश्रमिकको मामिलामा पनि ठगिएकी रहिछिन् । यसबारे पनि उनले कुनै कुरा लुकाइनन् । ‘सुरुमा त आश्वासन र सम्मानका ठूला कुरा गर्छन् तर पछि पारिश्रमिक दिने मामिलामा भने गरिब अवस्था । दिक्क लागिसक्यो, कति सहनु,’ उनको तिक्तता छ ।
एकपटक एक नायकसँग आफ्नो नाम जोडेकोमा पनि जेनिशा दिक्क भएकी थिइन् । केही सिनेमामा सहयोग गरेका ती नायकसँग गलत रूपले आफ्नो नाम जोडेकोमा चित्त दुखेको बताउने जेनिशाले घटना र विचारसँग भनिन् । ‘कसैले सपोर्ट गर्छु भन्यो भने कसले पो नाइँ भन्छ र ? म त्यतिबेला नयाँ थिएँ र मलाई कसैको सहयोग पनि चाहिन्थ्यो । तर, त्यही कुरालाई गलत रूपले बजारमा चर्चा गरियो,’ जेनिशाले पुरानो कुरा कोट्याइन्, ‘खै त अहिले घामजस्तै छर्लङ्ग भयो नि उहाँ र मेरो सम्बन्ध । बेक्कारमा दुःख दिने काम भयो ।’
१० श्रावण २०६९, बुधबार ०३:३५ मा प्रकाशित
एलिना ए झ्याउरी !	३ कार्तिक २०७७, सोमबार १०:०२
अमेरिकाबाट विजयको दशैँ कोशेली ‘माया बैगुनी’	२ कार्तिक २०७७, आईतवार ०९:५४
डा. श्रेष्ठले लिएर आए ‘बैगुनी-२’	१ कार्तिक २०७७, शनिबार १०:११